यस वर्ष १७% कम भयो सामुदायिक लघुवित्तको खुद नाफा
वैशाख १९, काठमाडौं । सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको खुद नाफा यस वर्ष १७ प्रतिशत कम भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार गत वर्ष रू. २ करोड ६ लाख ५९ हजार खुद नाफा गरेको कम्पनीले यस वर्ष रू. १ करोड ७१ लाख १० हजार मात्र यो नाफा गरेको हो ।
यस वर्ष कम्पनीको सञ्चालन नाफा ४० प्रतिशत कम हुदा खुद नाफा घटेको हो । गत वर्ष रू. ३ करोड १६ लाख ७३ हजार सञ्चालन नाफा गरेको कम्पनीको यो नाफा यस वर्ष सम्भावित जोखिम शीर्षकमा बढी रकम छ्ट्याएकाले रू. १ करोड ८९ लाख ७३ हजार सञ्चालन नाफा भएको हो ।
गत वर्षभन्दा यस वर्ष सम्भावित जोखिम शीर्षकमा ३१६ प्रतिशत बढी रू. २ करोड ९४ लाख ५५ हजार रकम छुट्याइएको छ । गत वर्ष शून्य रहेको खराब कर्जा संकलन यस वर्ष रू. ७९ लाख १३ हजार रहेको छ ।
३२ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरी चुक्तापूँजी रू. १३ करोड २० लाख पु¥याएको कम्पनीको जगेडा कोष रकम गत वर्षभन्दा २८ दशमलव ६५ प्रतिशत कम रू. ६ करोड ६५ लाख ५ हजार कायम भएको छ । यस वर्ष २० प्रतिशत बढी रू. ४९ करोड १६ लाख १६ हजार निक्षेप संकलन गरेको कम्पनीले १९ प्रतिशत बढी रू. १ अर्ब २९ करोड ८७ लाख ३७ हजार कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
कम्पनीले गत वर्षभन्दा ११ प्रतिशत बढी विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट रू. ६९ करोड २८ लाख ७७ हजार बराबरको कर्जा सापटी लिएको छ । गत वर्ष कम्पनीको निष्क्रिय कर्जा २ दशमलव शून्य ५ रहेकोमा यस वर्ष ६ दशमलव शून्य ८ पुगेको छ । तेस्रो त्रैमाससम्म प्रतिशेयर आम्दानी रू. १७ दशमलव २८ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १५० दशमलव ३८ रहेको छ ।